Karting-4GP: fihodinana 13 no miandry amin’ny famaranana | NewsMada
Karting-4GP: fihodinana 13 no miandry amin’ny famaranana
Efa vonona ny mpikarakara ao amin’ny kaomisiona ny karting eo anivon’ny federasiona (FSAM), amin’ny fandraisana ny dingana farany amin’ny fifaninanam-pirenena amin’ity taranja ity. Fifaninanana, hotontosaina ny alahady izao eny amin’ny lalana “Total Karting” eny Imerintsiatosika.
Fantatra, omaly, ny fitsipika sy ny fandaharam-potoana rehetra, mandritra io alahady io. Araka izany, hifaninana ao anatin’ny halavirana 1000 metatra ireo mpanamory amin’ny sokajy rehetra. Io halavirana io no hifanandrinana amin’ny dingana 3 mifanesy. Ho amin’ny lalao famaranana kosa, hiodina in-13 eo amin’ny “Total Karting”, mirefy 1000 metatra io izy ireo. Hafana ary ho mafy, araka izany, ny ady hatrehan’ny mpanamory amin’ity 4GP, ambaratonga farany amin’ny fiadiana ny ho tompondaka 2018, amin’ny karting.
Mialoha ny hiatrehana io fifaninanana farany, efa niomana ary vonona ny hiady hatramin’ny farany mba hitazomany ny toerany amin’ny maha tompondaka azy Rajoelison Tommi. Ity mpanamory ity izay manana isa 240 amin’izao ary nisalotra indroa nisesy ny anaram-boninahitra amin’ny karting. Tsy hanaiky lembenana etsy ankilan’izay ireo kalaza toa an-dRakotomalala Haja, manana isa 186. Mila miady mafy kosa i Nathan sy i Menja, na dia nahazo isa ambony aza tamin’ny dingana farany teo satria mifanalavitra ihany ny isa raha mihoatra amin’i Tommi sy i Haja.
Marihina fa toy ny tamin’ny 3GP (3ème Grand Prix) farany teo, hivantana amin’ny Televiziona Malagasy ny hetsika rehetra hiseho eny Imerintsiatosika ny harivan’ny faha 28 oktobra io. Hiaina mivantana, araka izany, ireo mpakafy karting, na tsy ho afaka hanatrika eny an-toerana aza.
Aorian’ity dingana farany ity, mbola hisy ny hetsika amin’ny faran’ny volana novambra, amin’ny taranja karting. Hetsika mitondra ny anarana hoe “Trophée International de Madagascar”, entina hamaranana amin’ny fomba mendrika ny taom-pilalaovana 2018.